Al-Shabaab oo weerar ku qaday saldhig Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ku leeyihiin degaanka Hoosingow | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Al-Shabaab oo weerar ku qaday saldhig Ciidamo ka tirsan kuwa...
Dagaalka ayaa yimid, kaddib markii sida la sheegay Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ku leeyihiin degaanka Hoosingow, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo saacado ah qaatay.
Sidoo kale dadka degaanka waxaa ay sheegeen inay cabsi ballaaran soo wajahday intii uu dagaalka socday, maadaama ay ka baqin qabeen inay waxyeelo kasoo gaartao dagaalka.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degaanka KHoosingow ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Kenya ay degaankaas ka wadaan dhaq dhaqaaqyo Ciidan maadaama Saldhiga ay ku sugan yihiin la weeraray.
Previous articleErdogan oo weerar afka ah ku qaaday ra’iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi.
Next articleWaa kuma ninka Muslimka ah ee noqday qofkii ugu taajirsanaa ee dunida soo maray?
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu si rasmi ah “xasuuq” ugu aqoonsado dil ay Boqortooyadii Cusmaaniyiinta ugu gaysteen dad Armenian ah, waxa...
Wadamada bariga Afrika oo dib u dhigey codsi Soomaaliya ay ku...